Horudhac: Man City vs Crystal Palace… (Sky Blue oo caawa indhaha ku haysa guusheedii siddeedaad oo xiriir ah tartammada oo dhan) – Gool FM
(Manchester) 17 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa eegeysa inay gaarto guusheedii saddexaad oo xiriir ah tartammada oo dhan, marka ay sii wadi doonaan ciyaarahooda Premier League oo ay garoonkooda caawa ku soo dhoweynayaan Crystal Palace.
Kooxda Tababare Pep Guardiola uu hoggaamiyo ayaa guuleysatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, waxaana ay haatan fadhisaa kaalinta afaraad ee kala horreynta horyaalka.
Dhinaca kale Palace taasoo dhibic ka soo qaadatay Arsenal Jimcihii ayaa ku jirta kaalinta 13-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 10:15 Habeennimo xilliga geeska Afrika
Manchester City ayaa weli waxaa dhaawacyo kaga maqnaanaya daafacyadeeda Nathan Ake iyo Aymeric Laporte.
Sergio Aguero sidoo kale weli lama heli karo maadaama uu karaantiil ku jiro, laakiin Eric Garcia ayaa laga yaabaa inuu ku lug yeesho kulankan.
Crystal Palace ayaa qiimeynaysa inay la soo shirtago isla shaxdii barbaraha goolal la’aanta ah la soo galay Arsenal kulankoodii ugu dambeeyey, iyadoo daafacooda James Tomkins oo taam ah uu muhiim u yahay kulankaas.
Mamadou Sakho ayaa weli ku sii maqnaan doona dhaawac bowdada ah, halka Martin Kelly uu sidoo kale weli maqan yahay.
>- Manchester City ayaa guuleysatay todobo ka mid ah 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay wajahday Palace, waxa ay barbaro gashay labo jeer, halka ay hal kulan guuldarro la kulantay.
>- Si kastaba ha noqotee, Man City ayaa guul la’aan ah labadeedii kulan ee garoonkeeda ay kula ciyaartay horyaalka naadiga Palace, Pep Guardiola waligiis ma uusan arin saddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah isagoo aan garaacin isla hal koox oo ka soo horjeedda xirfaddiisa tababarenimo.
>- Lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay labadaan koox ku kulmaan garoonka Etihad waxaa la iska dhaliyay 26 gool.
>- Manchester City ayaan laga badinin oo (unbeaten) ah 14 kulan oo isku xigta tartammada oo dhan, waxaana ay badisay todobadii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Man City ayaa 20 dhibcood ka qaadatay 24-kii suurogalka u ahaa oo ay ka heli kartay horyaalka Premier League.
>- Kooxda Pep Guardiola ayaa shabaqeeda ilaashatay shan kulan siddeed kulan oo ay garoonkeeda ku ciyaartay ilaa haatan xilli ciyaareedkan 2020-21.
>- Caawinta xigta ee uu sameeyo De Bruyne ayaa noqon doonta caawintiisii 100-aad ee uu u sameeyo Kooxda Manchester City tartammada oo dhan.
>- Crystal Palace ayaa guuldarro la’aan ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka, waxa ay guuleysteen hal kulan, halka ay barbaro galeen labo kulan.
>- Eagles ayaa doonaya inay sii wadato kulammadeeda xiriirka ahoo ay shabaqeeda gool ka ilaashanayso.
>- Waxa ay noqon kartaa Palace kooxdii ugu horreysay ee guul kaga gaartay Premier League labada kooxood ee ka dhisan Magaalada Manchester tan iyo Liverpool oo sidaas oo kale labada Manchester ku sameysay fasal ciyaareedkii 2008-09.
>- Kooxda Macallin Roy Hodgson ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliyo afar ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Dhammaan saddexdii kulan ee Roy Hodgson uu horyaalka Premier League ka gaartay Manchester City ayaa yimid iyadoo lagu ciyaarayay garoonka Etihad.